Mavhesi eBhaibheri Kunamata Kana Iwe Uchinzwa Kurambwa | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Mavhesi eBhaibheri Mavhesi eBhaibheri Kunamata Kana Iwe Uchinzwa Kurambwa
Nhasi tichave tiri kubata nema bhaibheri mavhesi ekunamata kana iwe uchinzwa kurambwa. Kana iwe wakambotambura kurambwa kare, iwe unonzwisisa zvazvinoreva. Iko kunzwa kwekusurukirwa, kunzwa kwekubviswa paruzhinji. Dzimwe nguva, kunzwa uku kunogona kuve semhedzisiro yekuzvidza vanhu. Zvakare, zvinogona kuve semhedzisiro yekushomeka kwakaomarara mupfungwa dzemunhu. Kana murume aine kushomeka kwakaomarara, iye kana iye asinganzwe chero chinhu chakanaka nezvavo uye izvi zvinogona kuita kuti vasiye musangano.
Kana kurambwa kuchikonzerwa nekutaura kunozvidza kubva kuvanhu, zvakaoma kwazvo kuti anenge akuvadzwa akunde. Kana iwe uri mune ino mamiriro, zvakakosha kuti iwe uzive Mwari uye nekuMuziva kwazvo. Tisati tanyatsoongorora mavhesi emubhaibheri kuti unamate kana iwe uchinzwa kurambwa, ngatikurumidze kuratidza zvimwe zvezvinhu zvinoita kuti unzwe kurambwa.
Zvinhu Zvinokonzera Kunzwa Kurambwa
Chero murume anotambura nekuzvitarisira pasi anozove nekunzwa kwekurambwa uye izvi zvinogona kukonzera kushushikana. Kuzvidzora kwakaderera kunogona kukonzera kuti munhu abve munharaunda. Iyo isiriyo yepfungwa mamiriro anoita kuti murume azvione iye zvishoma.
Kana iwe wakambonzwa chirevo chakakurumbira chemuBhaibheri, Pane chinhu chakanaka chingabuda muNazareta? Chirevo ichi chakataurwa nemumwe munhu anozvitarisira pasi pamusoro peguta reNazareta. Izvi zvinotsanangura kuti nei akapa guta mhosva. Haaone chero chinhu chakanaka chinobuda kunze kweguta. Saizvozvo, murume anozvitarisira pasi haazozviona achiita chero chinhu chakanaka muhupenyu uye izvi zvinomuita kuti abve munharaunda.
Kana Pasina WeKukumbira Rubatsiro
Kana iwe uchinyatsoda rubatsiro uye ukatadza kuwana mumwe munhu akakodzera zvakakwana kuti ubatsire rubatsiro, unozotanga kuve nekunzwa kwekurambwa. Murume asina mumwe munhu wekutendeukira kwaari panguva yaanoida zvakanyanya anonzwa kusuwa panguva iyoyo panguva. Uye kana kutarisirwa kusingaitwe, kunogona kukonzera kushushikana.
Chimwe chechikonzero chikuru chekuora mwoyo kunzwa kwekurambwa. Kunzwa kwekurambwa kunogona kukonzera murume kuti aone pasina chikonzero chekuramba achienderera mberi. Kana izvi zvikaitika, pfungwa dzekuda kuzviuraya dzinotanga kupenya mupfungwa dzemunhu akadaro.
Kana Kunzwa Kwemhosva Kukunda Murume
Kunzwa kwekurambwa kunogona kugara mukati kana murume achinzwa mhosva pamusoro pechimwe chinhu. Yakadaro nyaya yaJudhasi Iskarioti. Mushure mekutengesa Kristu nemari makumi matatu yesirivheri, akatadza kutakura mhosva, akakundwa nazvo.
Kusiyana naMupostora Petro uyo airatidzika kunge Mwari wekuregerera mushure mekuramba Kristu katatu, mhosva yaisakwanisa kuita kuti Judhasi Iskarioti awane nzira yekudzokera kuna Mwari. Akadzinga kurambwa kubva kune dzimwe hama nekuda kwezvaakaita uye akazviuraya.
Maitiro Ekukunda Kunzwa Kwekurambwa
Zviyeuchidze pachako kuti Mwari anokuda zvisinei nemamiriro ezvinhu aunozviwana iwe
Zviudze wega kuti Mwari anogara akatendeka kukuregerera zvivi zvako zvese kana iwe uine kutendeuka kwechokwadi.
Nguva dzose yeuka kuti Mwari akakusika nemufananidzo wavo uye akafanana. Iwe ndiwe wakanakisa vhezheni yako uye Mwari haakanganise.
Rangarira kuti Satani anonyengera. Ziva madimikira emuvengi kukukukudzira kure nekuvapo kwababa.
Dzidza chinyorwa kuti ubate akawanda anovimbisa izvo Mwari zvaakakugadzirira.
Enda pamabvi ako unamate nemavhesi ebhaibheri anotevera
Mavhesi eBhaibheri Ekunamata
VaRoma. 8: 1 Naizvozvo hapana ikozvino kupiwa mhosva kune avo vari muna Kristu Jesu.
VaEfeso 1: 3-5 Mwari naBaba vaIshe wedu Jesu Kristu ngaarumbidzwe, iye akatiropafadza muna Kristu nezvikomborero zvose zvokudenga, sezvaakatisarudza maari nyika isati yavambwa, Ivai vatsvene, vasina chavanopomerwa pamberi pake. Murudo, akatitemera kare kuti tiitwe sevana kuburikidza naJesu Kristu, zvinoenderana nechinangwa chekuda kwake.
Mapisarema 138: 8 Jehovha achandizadzisa; rudo rwenyu, imi Jehovha, runogara nokusingaperi. Musasiya basa ramaoko enyu.
Mapisarema 17: 7-8 Ndiratidzei zvishamiso zvorudo rwenyu rukuru, imi munoponesa noruoko rwenyu rworudyi avo vanovanda panzvimbo yenyu. Ndichengete semboni yeziso rako, ndivanze pamumvuri wemapapiro ako.
Mapisarema 18:35 Munondipa nhoo yenyu yokukunda, uye ruoko rwenyu rworudyi runonditsigira; unokotama kuti undiitise mukuru.
VaRoma 8: 37-39 Kwete, pazvinhu zvese izvi tiri vakundi nokupfuurisa kubudikidza naiye wakatida. Nekuti ndine chokwadi chekuti kana rufu kana hupenyu, kana ngirozi kana madhimoni, kana zvazvino kana ramangwana, kana masimba api zvawo, kana kukwirira kana kudzika, kana chero chinhu chipi zvacho muchisikwa chose chingakwanise kutiparadzanisa nerudo rwaMwari urwo. muna Kristu Jesu Ishe wedu.
VaEfeso 1: 6 Kuti kurumbidze kubwinya kwenyasha dzake, dzaakatigamuchira mumudiwa
1 VaKorinde. 6:20 Nekuti makatengwa nemutengo; Saka kudza Mwari mumuviri wako
Zefania 3:17 Jehovha Mwari wako anewe, ndiye ane simba rokuponesa. Achafarira kwazvo iwe, achakunyaradza nerudo rwake, achafara pamusoro pako nekuimba.
Mapisarema 139: 13-14 Nokuti makaumba itsvo dzangu; makandiruka mudumbu ramai vangu. Ndinokurumbidzai, nekuti ndakaitwa zvinotyisa uye zvinoshamisa. Mabasa ako anoshamisa, ndinoziva izvozvo zvizere.
VaRoma 8: 16-17 Mweya amene unopupurirana nemweya wedu kuti tiri vana vaMwari, uye kana tiri vana, tiri vadyi venhaka - vadyi venhaka vaMwari, vadyi venhaka pamwe naKristu, chero tikatambura naye kuti tikudzwewo. naye.
1 Petro 2: 9 Asi iwe uri dzinza rakasarudzwa, upristi hweumambo, rudzi rutsvene, vanhu vake, kuti muparidze kunaka kwaiye wakakudanai kuti mubve murima mupinde muchiedza chake chinoshamisa.
VaEfeso 2:10 Nokuti tiri basa raMwari, rakasikwa muna Kristu Jesu kuti tiite mabasa akanaka, akagadzirwa kare naMwari kuti tiite.
Previous nyayaMagwaro Kunamatira Hukama Hwako
inoteveraNei Kunamata Munamato waIshe inzira inoshanda yekunamata
Maitiro Ekumisa Kubhuroka Kunamatira Mato
PISAREMA 71 Zvinoreva vhesi neimwe
Yekukurudzira minamato Munguva dzeKushushikana